I-WTM yeAfrika yokuTyikitya kwakhona i-Afrika yoKhenketho kunye nezoKhenketho kwiNew Awardee
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Awards » I-WTM yeAfrika yokuTyikitya kwakhona i-Afrika yoKhenketho kunye nezoKhenketho kwiNew Awardee
Awards • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo • Tourism
Amabhaso e-WTM eAfrika
I-WTM Africa iyavuya ukwazisa ukuba inkampani enamava okunethezeka kunye neBeyond iphumelele amabhaso eReigniting Africa Travel & Tourism. Imbaleki yesibini yiNdalo yaseKapa, ​​ngelixa ubuGcisa boPhengwini bolondolozo bafumana imbeko ebekekileyo.
Kwaye ngapha koko uzuze kwakhona iMbasa yokuHamba kwakhona kwe-Afrika yoKhenketho nezoKhenketho ngephulo layo elikhuthazayo leWILDwatch.
Intengiso yeHlabathi yoKhenketho eAfrika kwinqanaba “lokuBusa kwakhona iAfrika” livuma elona phulo linempembelelo, liqhutywa ngamabali kwaye liqinisekile indawo ekuyiwa kuyo.
Eli phulo labona ukusasazwa ngqo kabini-imihla ngemihla kwi-safaris ebonakalayo ukugcina iAfrika iphila ezingqondweni nasezintliziyweni zabahambi.
kwaye ngapha koko iphumelele ibhaso ngephulo elikhuthazayo leWILDwatch Live Safaris, nelasekwa ngexesha lobhubhane we-COVID ngokudibeneyo neengcali zosasazo lwezilwanyana zasendle iWildEarth. Eli phulo labona kwayeNgaphaya kokuhamba bukhoma kabini-yonke imihla, iiyure ezintathu zihlala zi-safaris ebonakalayo ukugcina iAfrika iphila ezingqondweni nakwiintliziyo zabahambi kwihlabathi liphela. Ngaphaya kwesikhokelo baxhotyiswa kwaye baqeqeshwa ekwabelaneni ngentando yabo yezilwanyana zasendle kunye nolondolozo kwikhamera.
“NgamaBhaso okuBusa kwakhona iAfrika, iWTM yeAfrika ibijonge ukukhangela amabali anyanisekileyo ayiliweyo kunye nabathengi akhokelela e-Afrika ebomini ngexesha elinzima le-COVID-19. nangapha kweWILDwatch Live Safaris uzikrweqe zonke iibhokisi kwaye ushiye ijaji. Eli phulo lenziwa kakuhle ngeendlela ezahlukeneyo zomxholo kwaye ligcina uthando lwee-safaris zase-Afrika kunye nolondolozo luphila. Ikwangqineke iyindlela engakholelekiyo yokufumana inkxaso-mali efunekayo kumalinge okulondolozwa afanelekileyo, ”utsho UMegan Oberholzerzer, UMlawuli wePotifoliyo: Ukhenketho, uKhenketho kunye namaShishini oYilo eRX Africa (iMiboniso yoMhlanga).
ICape Nature yimbaleki elungele iphulo # lokuHlaliswa kweNdalo elikhuthaza abahambi basekuhlaleni ukuba baphonononge ilizwe labo. Eli phulo laqaqambisa ukubaluleka kweendawo ezisingqongileyo kunye neeholide ezizinzileyo.
“Iijaji ziyithande ngokupheleleyo into # yokuHlala eNtsha. Ngexesha apho abahambi baziva bedidekile kwaye bedidekile malunga nokukhetha iiholide kunye nezinto ezinokwenzeka, eli phulo lenze lula uhambo kwaye lwenza ukuba inkqubo izive ikhuselekile kwaye ikhuselekile. Ikhuthaze ukuzithemba kwaye iwachaze ngokucacileyo amathuba abahambi, ”utsho u-Oberholzerzer.
Ubugcisa boLondolozo bufumene ukukhankanywa okuhloniphekileyo kungekuphela ngexabiso lolondolozo, kodwa kwanokuba eli phulo ligxile kwiintsapho nakubantwana kwaye lenza oonozakuzaku abatsha boMzantsi Afrika njengendawo ekuyiwa kuyo.
Iphulo loLondolozo lwee-Penguin, eliyilwe ngu-Jon Monsoon ngokusebenzisana namava e-Airbnb, linike ulwazi kunye neenkcukacha malunga neKapa kunye noonombombiya base-Afrika abasengozini ngokusingatha ii-webinars eziphilayo nezisebenzisanayo. Inikezela ngomsebenzi obandakanyekayo kwi-Intanethi, imfundo yendalo esingqongileyo kunye neklasi yobugcisa efanelekileyo kubo bonke ubudala ekhaya ngexesha lokutshixa.
“Iijaji zachukunyiswa kakhulu ngumgangatho wazo zonke iziphakamiso ezithe zafumaneka kweli nqanaba litsha nelinomdla. Bebubungqina bokwenyani bentshisekelo, ukuzinikela kunye nokomelela kweshishini lethu, ”uvale ngalo mazwi u-Oberholzerzer.
Intengiso yeHlabathi yoKhenketho (WTM) Ipotifoliyo inemicimbi ekhokelayo yokuhamba, ii-portal ezikwi-Intanethi kunye namaqonga abonakalayo kumazwekazi amane, avelisa ngaphezulu kwe- $ 7.5 yezigidigidi zeshishini. Iziganeko zezi:
I-WTM Afrika yamiselwa ngo-2014 eKapa, ​​eMzantsi Afrika. Ngaphezulu kweengcali zeshishini lokuhamba ezingama-6,000 ezizimasa iimarike zaseAfrika ezihamba phambili neziphumayo nezikhenketho. I-WTM Afrika ihambisa umxube oqinisekisiweyo Abathengi ababanjiweyo, imithombo yeendaba, ukuqeshwa kwangaphambili, uthungelwano lwendawo, imisebenzi yangokuhlwa kunye nabakhenkethi bezorhwebo abamenyiweyo.
Umsitho olandelayo: NgoMvulo, umhla we-11 ku-Epreli, ukuya ngoLwesithathu we-13 ka-Epreli 2022, eKapa
eTurboNews uliqabane leendaba kwiWTM Afrika.